Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay Musuqmaasuqa
Soomaaliya gaar ahaan Magaalada Muqdisho xalay waxa ay u aheyd Habeen wanaagsan, maadaama la doortay Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) oo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan ay taageersan yihiiin.
Xalay Muqdisho waxaa la riday Rasaas aad u fara badan, taas oo markii hore ay dad u maleynayeen Dagaal toos ah, balse ay aheyd oo keliya Dabaaldeg, waxaana wadooyinka Muqdisho isugu soo baxay shacab aad u fara badan, taas oo sababtay in la kala garan waayo Ciidamada iyo dadka rayidka ah.
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) ayaa dhankiisa Warbaahinta Dowladda kala hadlay shacabweynaha Soomaaliyeed, waxaana uu sheegay guushaan in ay leeyihiin dadweynaha Soomaaliyeed, wuxuu sheegay cadaalada iyo amniga in uu xoogga saari doono.
Mr. Farmaajo ayaa sidoo kale sheegay dhowaan in uu jeedin doono khudbad khiiro leh, taasi oo ay isgu imaan doonaan dhamaan shacabka Soomaaliyeed, maadaama shacabka ay si xad ka bax ah u taageeraan Mudane Farmaajo.
Tii xalay ka dhacday Magalada Muqdidsho waa la ogaa, oo dadka iyo Ciidamada la kala garan waayay, Rasaastii ay dadka ka carari jireena xalay ay dhanka ka dhaceysay u soo ordayeen, taasi oo muujineysa taageerada dareen la’aanta keentay ee loo hayo Maxamed Farmaajo.